Kukhona abadlali, abanamakhono futhi enza izinto ezihlukahlukene ukuze bakwazi ukudlala izindima eziningi wefilimu. Futhi hhayi nje ukuletha izithombe eziningi zibe munye movie, kodwa futhi ikhohliswa ngokuthi njalo sibona omunye.
Lesi sihloko iqukethe izibonelo ezicacile iningi indlela abadlali Ihlanganisa umfanekiso ezinye izinhlamvu movie efanayo.
Keyt Blanshett e "Manifesto"
Kulesi movie, Kate kuvezwa abantu 13. Ngaphezu kwalezi esitfombeni, wayengumhlali uthisha, inkosikazi ethile, umfelokazi izinhlamvu eziyisithupha. Libuye Kunzima kakhulu ukukholelwa ukuthi intandokazi indlovukazi Elf wonke umuntu 'siguqulwe' e edume Bob Dylan kule drama "Ngingumfana Not Kukhona."
Tom Hanks "Cloud Atlas"
Amaqhawe entsha yencwadi D. Mitchell ukubonisa inqubo ukuphindukuzalwa umphefumulo, futhi ifilimu (futhi incwadi) isibopho uhlamvu ihamba kusukela kuyinqaba inoveli. Ngaphezu kwalezi ezine ezihlukene kakhulu uhlamvu izindima, Tom Hanks fake nokuboniswe umphathi wehhotela lase futhi umshicileli.
Hyugo Uiving e okufanayo "Cloud Atlas"
Hugo kwaba ezimibalabala nakakhulu iqoqo izinhlamvu, konke okuyizinto ezingemnandi kakhulu, ukusho okungenani.
Mayk Mayers ngendlela inkulumo yokulingisa ka bondianu "Ostin Pauers: Goldmember"
Myers - usomahlaya ezinhle ngempela. Nakuba abacusumbuli baye wahlangana nalona yinhlekisa movie Bond pretty cool, izibukeli eziningi namanje ujabulele umbono ke. I isihawu kuphela wukuthi UMike useke akamenyiwe iyiphi amafilimu ehloniphekile kusukela kuleso sikhathi.
Cheech Marin, "Kusukela Ukuhlwa Till Dawn"
umlingisi Omkhulu Marin wadlala kahle ngakho balingiswa abathathu ifilimu esiyinhloko sehlelo ababuki abaningi musa ngisho baye baqaphela ukuthi womathathu babengumuntu oyedwa. I esimnandi kakhulu kwaba Yiqiniso, Chet bokuqabula nesikhalazo yakhe edumile.
Eddi Merfi e "Norbit"
Eddi Merfi - kumdlali wasesiteji umhlabeleli aziwa yokuthi nje uthanda ukudlala kanye indima ezingaphezu kweyodwa, nokuguqula ngokuphelele ngokwabo kule nqubo.
UNahume Suleman futhi "Imfihlo 7 nodade"
Lapha Naumov Suleman udlala abodade eziyisikhombisa, abahlala yini ngomphakathi onabantu avunyelwe abe nomntwana oyedwa. Ngamunye wabo ushiya abantu izindlu kuphela ngosuku, ngemuva kuso okuthiwa. Akukho nzima ukuqagela ukuthi odade zahlukahlukene kakhulu ngokwemvelo.
Reyf Fayns futhi 'Taste of kwelanga "
Ralph lolungenamaphutsa iveza Sonnenstein multigenerational ebhekana nempi, ekamu lokuhlushwa kanye 1956 ukuvukelwa Hungary.
Dzheyms Makevoy ku Thriller "Split"
Emzimbeni Kevina Kramba ahlalisane izinhlamvu 23, futhi umuntu 24 okuzelwe phambi kwamehlo ethu impela. Izibukeli ziboniswa 7 wabo kuphela, futhi wonke eliyingqayizivele futhi ehlukile ngokuphelele. McAvoy actor ncamashi wathola ukuqashelwa kanye nenhlonipho esusela izilaleli futhi baxgeki.
Kuyaphawuleka lapha ukuthi zithi wabala kuphela futhi elalidume kunawo wonke, kodwa hhayi bonke abadlali abakwazi izindima eziningi ngesikhathi esisodwa. Zonke iphuzu engenakwenzeka. Ngakho-ke kufanele eduze ubuyekeze movie abawuthandayo: owazi, mhlawumbe sibe ukumangala, futhi sifunda Thixo yakhe, enza ngeqhaza.
Amafilimu ezinhle kakhulu emhlabeni (uhlu)
Iminyaka yokuphila Hristofora Kolumba: Biography, yohambo, okutholakele
Ukuthi baziphathe kanjani ngemva ukudluliswa umbungu? Ngo kokukhulelwa kwesibeletho. HCG emva ukudluliswa umbungu
Saratov: izakhiwo kanye ukuhlela zasemadolobheni
Imbali ibhizinisi kusuka ekuqaleni: indlela ukuvula
Imifino nezithelo entwasahlobo